Wararkii ugu Dambeeyey Ee MAgaalada Gaalkacyo iyo Xaalada oo Wali Cakiran iyo Labada Maamul oo Wada.. – Djiboutination
HomeNews Wararkii ugu Dambeeyey Ee MAgaalada Gaalkacyo iyo Xaalada oo Wali Cakiran iyo Labada Maamul oo Wada.. Wararkii ugu Dambeeyey Ee MAgaalada Gaalkacyo iyo Xaalada oo Wali Cakiran iyo Labada Maamul oo Wada..
- December 28, 2016 - in News 298 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo waxay daaha ka rogayaan in aysan wali jirin wax xal ah oo laga gaaray qadiyada la xariirta isku socodka ganacsiga ee magaalada, ka dib markii ay maamulada labada dhinacba keeneen caqabado keenay in ay kala xirnaato magaaladu.
Ganacsiga oo ahaa waxa kaliya ee horay iskugu gudbi jiray ayaa hadda hakad galay, waxaana meel kasta oo Suuqa kamid ah xiran wadooyinkii muhiimka ahaa, sidaas oo kalena waxaaba adkaatay in ay gaadiidka xamuulka sida ee Ganacsigu u gudbaan labada dhinac.
Puntland & Galmudug ilaa hadda ma aysan keenin xal rasmi ah oo la xariira sidii loo xasilin lahaa xaaladda Gaalkacyo, waxayna Ganacsatadu ku eedaynayaan in ay labada dhinacba eeganayaan danahooda gaarka ah.
Sida muuqata Gaalkacyo ayaa xaaladeeda Ganacsi ay ku sii socotaa mid burbur qarka u saaran, maadaama aysan jirin ilaa hadda wax fursad badbaadin ah oo ay oo ay dhinacyadu wadaan.
Gaadiid wada rar u badan bagaash, Cuno iyo Shidaal ayaa ku xaniba dhanka Waqooyiga ee Puntland, ka dib markii sida ay Puntland ku doodeyso ay Galmudug jartay wadada dheer ee laamiga ah, si taas la mid ah gaadiid wada Khudaar iyo Xoolaha nool ayaa ku xaniban dhanka Koonfurta ee Galmudug ay maamusho.
Dooda labada dhinac marka laga yimaado hubanti waxaa ah in Gaalkacyo ay dib uga dhacday magaalooyinka kale ee Soomaaliya, ayna mudo ka badan 3 bilood ku jirto xaalad adag oo aysan cidna ku sii joogi karin magaalada, maadaama mar kasta cabsi laga qabi karro dagaal dib uga qarxa magaaladaas.
Heshiisyo la gaaray ayaa u muuqday kuwa aan waxba ka hirgalin dhinaca Galmudug & Puntland labadooduba waxay isku eedaynayaan arrimaha taagan, laakiin xaqiiqada jirta ayaa ah in aysan Gaalkacyo wali ka dhicin heshiis rasmi ah oo ay dhinacyadu diyaar u yihiin in ay fuliyaan.
Previous article Maamulka Somaliland oo sheegtay in khaatumo State ay ka mid tahay Maamul hoostagga Somaliland Heshiisna ay Gaareen Next article (Dhageyso):-Cali Khaliif Galeydh ”Doorashadda Soomaaliya Abgaal ma Dhaafayso Nin darooda Kuma Tartami karo Sababtoo ah” About the author djibouti